Black Magic: MX Player PRO v1.7.24 Patched For Android [8.04 MB] (Feb 12th Updated)
MX Player PRO v1.7.24 Patched For Android [8.04 MB] (Feb 12th Updated)
Posted by Black Magic | Posted in Android Applications , Players | Posted on 1:19 PM
Format အားလုံးနီးပါကို ဖတ်နိုင်တဲ့ Player ပါ...၊ Original Player က Support မလုပ်တဲ့ Format တွေကို ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တော်တော်များများ ကြိုက်ကြပါတယ်..၊ Subtitle Scroll Mod လည်းပါတာမို့ စာတန်းထိုးစနစ်​နဲ့ Format လုပ်​ထားတဲ့ Video File ​တွေကိုလည်း အဆင်​​ပြေ​ပြေကြည့်​နိုင်​​မှာပါ..၊ ပြီးတော့ Stream ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း အဆင်ပြေပြေကြည့်နိုင်ပါတယ်..။အခုနောက်ဆုံး Update တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..၊ Play Store မှာ 5.70 $ နဲ့ရောင်းနေတာပါ.၊ Android OS 2.1 နဲ့အထက်မှာ အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်မှာပါခင်ဗျာ..၊
a. HARDWARE ACCELERATION - Hardware acceleration can be applied to more videos with the help of new H/W decoder.
Credit To ကိုဇောသွင်
Blog Archive January (1) June (1) January (2) August (8) July (38) June (14) April (5) March (46) February (146) January (208) December (364) November (537) October (661) September (535) August (599) July (247) June (132) May (9) December (2) July (3)